Oku ndi nkuzi nkuzi nke nkuzi maka ndi nkuzi ka ezigha n’obodo | RayHaber
HomeGeneralA ga-ezigara mba ndị ọzọ ná mba ọzọ
18 / 07 / 2017 General, Isi akụkọ, Turkey
Ozi nke National Education ga-ahọpụta ndị nkụzi ná mba ọzọ. Ngwa maka nhọpụta nke ndị nkuzi ka a họpụta ha ná mba ndị ọzọ maka akwụkwọ asụsụ mba ọzọ nke Ministry of National Education malitere.
Ozi nke National Education ga-eziga ndị nkụzi mba ọzọ iji mụọ Bekee. Dika ntuziaka nke ogbako ulo oru na ndi nkuzi ulo akwukwo nke a ga-eziga iji mụọ asụsụ Bekee n'èzí, ngwa ndị ahụ malitere na 17 July 2017. N'ebe a, ndị nkụzi 70 ga-ezigara mba ọzọ iji mụọ Bekee.
Ọnọdụ nke ngwa a ga-arụ ọrụ n'okpuru Ngalaba Nkà Mmụta Ọchịchị Mba nakwa ka ọ na-arụ ọrụ maka ọbụlagodi afọ 3 na ụlọ ọrụ nkụzi. N'ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ejikọtara na General Directorate of Education and Technical Education, ndị na-achọ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ndị nkụzi ubi, ndị na-elekọta ụlọ nyocha, ndị na-arụ ọrụ ụlọ nnyocha ma ọ bụ ndị na-elekọta ụlọ nyocha nwere ike itinye.
A gaghị anabata ngwa ndị nkụzi na ndị nduzi na ndị nduzi nchịkwa. Na mgbakwunye, afọ 45 agaghị agwụ. A na-ekwu na chọrọ YDS ka ọ nata ma ọ dịkarịa ala 50 si na YDS.
Ministry of Education, teknụzụ kọntaktị, teknụzụ nkà na ụzụ, ụgbọ mmiri, eletriki na teknụzụ eletriki, nkà na ụzụ mmepụta ihe, nkà na ụzụ, ebe obibi na ọrụ njem, nkà na ụzụ, nkà na ụzụ, teknụzụ ụgbọ ala, Onye nkuzi 70 si na mpaghara ndi oru uzu ume na ihe oriri na ihe onunu ga eziga ndi ozo.
A ga - eji ngwa maka ndị nkụzi zigara MEB mba ọzọ n'etiti 17 July na 28 July 2017. Ndị obula ga-akwado akwụkwọ ndị ahụ a rịọrọ ka ha gọọmentị n'ógbè gọọmenti ma nyefee ha akwụkwọ ntụziaka nke mba ahụ site na aka ma ọ bụ site na mail. A ga-agba ndị na-arịọ ajụjụ ọnụ ajụjụ mgbe ha rụsịrị akwụkwọ ahụ. Pịa ebe a iji nweta nkọwa ndị ọzọ.
Isi: www.mymemur.com.t bụ
Ndị ọrụ gọọmentị MONE ISGB na-eme nyocha na TÜDEMSAŞ
YOLDER's Alumunermermite Ray Welder Course Mmemme…
E nyere n'efu 16 puku ụmụaka 100
OZI OZU AHỤKWU GA-EBU EBIDI
Ezinụlọ na Ọrụ Njem
Ozi nke Education
Onye isi oche YILMAZ: Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na-ebu maka ụgbọ mmiri Başkan
RayHaber Ozi Ntanye 18.07.2017